Ihe okike choro bia na gam akporo site n’aka onye okike nke Ike na Ime Anwansi | Gam akporosis
Jon Van Caneghem ji n'aka adịghị ka aha ya na mbụ, mana ọ bụrụ na anyị asị na ọ bụ onye okike nke akụkọ mgbe ochie Ike na Ime Anwansi RPG usoro, nke emesiri gbakwunye usoro Heroes of Might and Magic, anyị nwere ike ịchọpụtarịrị na anyị na-eche otu n'ime aha ndị dị mkpa na RPGs oge niile. Dị ka Peter Molyneux, onye okike nke Populous, na onye rutere na gam akporo ya na egwuregwu ufodu dika nke a, Caneghem sonyeere ndị akụkọ egwuregwu ahụ na-eme ka echiche ha na echiche ha na egwuregwu mkpanaka, nke na-arịwanye elu na mkpa dị ukwuu maka ụlọ ọrụ egwuregwu vidiyo.
Ọ bụ VC Mobile Enternainment nke kwalitere egwuregwu gam akporo ọhụrụ ya n'ụwa niile wee kpọọ ya Nchọpụta Ihe. Companylọ ọrụ a bụ nke Jon Van Caneghem duziri, otú anyị nwere ike ịghọta àgwà na nke a video egwuregwu nwere ike akpọrọ, nke nwere ụfọdụ nnọọ ịrịba ama usoro nke e ji mara, iche na-enye a ubé ọhụrụ egwuregwu echiche dị ka a dum. Bịanụ, anyị na-eche ihu egwuregwu nke na-esite n'echiche na-eche echiche banyere akụkọ egwuregwu vidio ahụ. Anyị na-eche ihu atụmatụ RPG aha anyị ga-anakọta ihe odide dị iche iche anyị ga-etinye n'ime otu ndị njem ga-enyocha ụwa.
1 Karịrị 500 mkpokọta e kere eke na-echere
2 Mepụta ụlọ mkpo gị, mepụta ezinụlọ ma nwee ndị na-egwu egwuregwu na PvP
Karịrị 500 mkpokọta e kere eke na-echere
Ihe okike choro na-etinye gi n’ihu egwuregwu vidio nke inwere 500 dị iche iche e kere eke na ị nwere ike ịnakọta, n'otu oge ahụ na ha nwere ike ịkwalite ma nwee ikike ha. Ga - enwe ọrụ ị ga - arụ, agbanyeghị na ịgagharị map bụ ihe ịma aka, ebe ọ bụ ebe a ka otu n'ime omume ọma nke egwuregwu vidio a batara. Will ga-enyocha mpaghara ọhụrụ na ọsọ nke mkpịsị aka gị iji chọta ihe ịma aka n'otu oge ahụ ịchọpụta mpaghara ọhụrụ.
Enwere otutu ọdịnaya dị ike na egwuregwu a n'ụdị PvE, mana echefubeghi PvP na nke i nwere ike mgbe niile na-awụlikwa elu na-alụ ọgụ ụdịdị megide ndị ọzọ Player.
Egwuregwu vidio na na egwuregwu mbụ ọ na-amalite ịpụta na nke ahụ bụ ihe ijuanya maka ụzọ pụrụ iche ọ na-egosi gị ihe niile ị nwere ike ịme, ebe enwere ọtụtụ ọdịnaya iji nwee ọ ,ụ, ewezuga ogo nke ọ bụla eserese, ndị iro na agwa anyị nwere akụ.
Mepụta ụlọ mkpo gị, mepụta ezinụlọ ma nwee ndị na-egwu egwuregwu na PvP
Ga-enwe ọtụtụ ọrụ, ihe karịrị 500 e kere eke ka ị kpọghee ma melite, agha nwere nnukwu atụmatụ, ikike ịmepụta ụlọ mkpo gị, kee ezinụlọ nwere ụgwọ PvP pụrụ iche, na-aga ihe omume kwa ụbọchị ma hụ onwe gị megide ọgụ na-adabere na ya nke ị ga-ama otu esi eji kaadị gị kachasị mma iji merie onye iro ahụ.
Nchọpụta ihe bụ ihe ịma aka dị ukwuu n'onwe ya, ebe anyị nwere ụzọ atọ dị iche iche igwu egwu: ọzọ, ụlọ elu agha na ulo mkporo ihe ịma aka. Ndị ọzọ bụ ọdịnaya PvE ndị a kpọtụrụ aha n'elu, ebe agha ụlọ elu ahụ ga-ama gị aka ka gị na ndị otu gị gbagoo dị ka o kwere mee. N'ikpeazụ, ihe ịma aka nke ụlọ mkpọrọ bụ ebe ị ga-ewu ụlọ mkpo gị ma wakpo ndị egwuregwu ndị ọzọ na ndị otu egwuregwu gị.
Ihe okike choro di site na Playlọ Ahịa Google na ụdị freemium. Egwuregwu pụrụ iche n'ihi na ọ sitere na akụkọ akụkọ egwuregwu ahụ na nke ahụ ga-eme ka ị nwee izu izu n'ihu.
Egwuregwu ebe ihe mbụ ị ga-enweta bụ na ị bụ eme nke ọma nke ọma. Nke abụọ bụ inwe oge ọ dị mkpa iji ghọta ihe niile ọ na-enye, ebe ọ bụ na ọ dị ọtụtụ na anyị ga-achọ oge anyị iji ghọta ndị ọrụ aka niile, agbanyeghị na ị ga-ekwu eziokwu, nkuzi site na mbido ga-emikpu gị n’ime ya.
Ọdịdị mara mma pụtara ọtụtụ, ebe ọ bụ na ha nwere oke mma na oke na izu oke maka egwuregwu nke ụdị ọrụ a nke na-eji ndị mgbaasị ahụ, ihe ndị e kere eke na ụdị amoosu niile. A iri n'echiche a.
Zọ nyochagharị maapụ gị
Ọ nwere ike iwe oge iji mara ya
Ihe okike - RPG egwuregwu
Developer: VC Mobile Ntụrụndụ, Inc.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Egwuregwu gam akporo » Site na onye okike nke akụkọ mgbe ochie nwere ike Ime anwansi na-abịa okike Quest na gam akporo
Ana m anwale ya ma ọ masịrị m, naanị ihe m na-atụ uche bụ ozi ndị ọzọ n'asụsụ Spanish, ịmụ banyere egwuregwu ahụ.
NIck nke egwuregwu: MiyabiN
Zaghachi Guille Natsuyaki Tsukino
Sundar Pichai na-ekwutọ iwu mbata nke Donald Trump